ရိုးရာကီမိုနိုပြုလုပ်တဲ့သူက နိုက်ကလပ်မယ်တွေအတွက် ဖန်တီးပြုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ Mask !!! - JAPO Japanese News
ရိုးရာကီမိုနိုပြုလုပ်တဲ့သူက နိုက်ကလပ်မယ်တွေအတွက် ဖန်တီးပြုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ Mask !!!
ဟူး 05 Aug 2020, 11:28 မနက်
ဂျပန်ရဲ့ Host Hostess အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့သူတွေအတွက် Covid 19 ထပ်မံကျရောက်လာမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာတော့ သူ့တို့အတွက် မဟာမိတ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ရိုးရာကီမိုနိုအ၀တ်အထည်ထုတ်လုပ်သူ Otozuki က Hostess များအတွက် အဆင်ပြေစေမည့် Mask များကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းတီထွင်ကာ နိုက်ကလပ်မှ Hostess တို့ရဲ့ မျက်နှာကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်မယ့်၊ ဧည့်သည်များနှင့်လည်း သောက်ရစားရ အဆင်ပြေပြီး စကားပြောဆိုရလွယ်ကူကာ စိတ်ချရမှုရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Mask ကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
COVID-19 ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေးများပိတ်ဆို့ခြင်းသည် ဂျပန် Hostessများနှင့် နိုက်ကလပ်များတွင် အလုပ်လုပ်နေသော သူများမှာလည်း အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် sekkyaku inshokugyōအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (Host Hostess များနှင့်အတူသောက်သုံးသည့်လုပ်ငန်း) ကို အစိုးရအထောက်အပံ့အစီအစဉ်မှ ဖယ်ထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လုပ်ငန်းများ ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် ထိုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးများတွက်တော့ အခက်အခဲများမမျှတစွာရှိနေမှာပါ။
ဒါ့ကြောင့် သူတို့အနေဖြင့် အလုပ်သစ်အခြေအနေများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် ကူညီတဲ့အနေနဲ့ Otozuki က အကသမားများ ၀တ်ဆင်တဲ့ မျက်နှာဖုံးကဲ့သို့သော Mask ကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ Face Veil လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးများတွင် ဒေါင်လိုက်အပိုင်းအစ ၃ ခုပါရှိပြီး နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ကုလားကာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူအနေဖြင့် Mask ကိုမဖယ်ဘဲ အစာစားခြင်းနှင့်သောက်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အ၀ တ်အထည်ထက်ပိုထူတဲ့ အ၀တ်စဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ဈေးနှုန်းမှာတော့ ယန်း ၂,၂၀၀ မှ ၃,၈၅၀ ကြား (ဒေါ်လာ ၂၀ မှ ၃၆ ဒေါ်လာ) ကြားအထိ ရှိ၍ Face Veil မျက်နှာဖုံးများကိုအရောင်အမျိုးမျိုးနှင့် ရိုးရာအထည်များဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့ရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ ? တကယ်ပဲ Mask တစ်လိုကာကွယ်ပေးနိုင်သလားဆိုတာ ရာနှုန်ူးပြည့်မသိရပေမယ့် စားဝတ်နေရေးအတွက် မဖြစ်မနေအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ Hostess တွေအနေနဲ့တော့ အသုံးဝင်တဲ့ အရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။
တိုကျို 2020 အိုလံပစ်အတွက် မီးရှူးတိုင်
ကိုရိုနာအဆုံးသတ်ဖို့ ၁ ရက်နေ့၊ ည ၈ နာရီကနေစပြီး ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးမီးပန်းတွေဖောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း !!!!